Soosaarayaasha & Alaab-qeybiyeyaasha Sanduuqa Farsamada Fibre Optic | Shiinaha Fiber optical Terminal Box Factory
FTTH Fibre Optical Face Box ZJ402
Guudmarka Sanduuqa qaybinta qaabkan yaryar ayaa si ballaadhan loogu adeegsadaa shabakadda FTTX si loogu xiro fiilada dhibcaha iyo qalabka ONU iyada oo loo marayo dekedda fiber. Waxay taageertaa kala-bixinta, qaybinta, isku-xirnaanta farsamada iyo rakibidda darbiga. Awoodda sanduuqaani wuxuu noqon karaa 1 xudun, 2 koronto, 4 gees. Astaamaha material Qalabka ABS ee la isticmaalay wuxuu xaqiijiyaa jirka xoog iyo iftiin. ● Qalab fudud: Ku dhaji darbiga ama dhulka uun dhig. Y Saxanka kala firidhsan waa la soo saari karaa markii loo baahdo ama inta lagu guda jiro rakibidda wadaadka ...
FTTH Fibre Optical Face Box ZJ401
Dulmarka guud EFON FDB-004C sanduuqa qaybinta muraayadaha ayaa joojinaya hal fiilo fiber optic ah oo leh ilaa 4 geesood, taasoo keenaysa horumar la taaban karo taasoo keenaysa khibrad macmiil oo wanaagsan marka FTTH la geeyo. Astaamaha material Qalabka ABS ee la isticmaalay wuxuu xaqiijiyaa jirka xoog iyo iftiin. ● Qalab fudud: Ku dhaji darbiga ama dhulka uun dhig. Y Saxanka kala firidhsan ayaa la saari karaa markii loo baahdo ama inta lagu jiro rakibidda hawlgalka ku habboon iyo rakibidda Slots Qalabka adabtarada ee la qaatay - Looma baahna boolal loogu talagalay ...
FTTH Fibre Optical Face Box ZJ202
Sanduuqan qaybinta qaab-dhismeedka yar ayaa si ballaaran loogu adeegsadaa shabakadda FTTX si loogu xiro fiilada dhibcaha iyo qalabka ONU illaa dekedda fiyuusta. Waxay taageertaa kala-bixinta, qaybinta, isku-xirnaanta farsamada iyo rakibidda darbiga. Awoodda sanduuqaani wuxuu noqon karaa 1 xudun, 2 koronto. Astaamaha material Qalabka ABS ee la isticmaalay wuxuu xaqiijiyaa jirka xoog iyo iftiin. ● Qalab fudud: Ku dhaji darbiga ama dhulka uun dhig. Tra Saxanka kala firidhsan ayaa lagaa saari karaa markii loo baahdo ama inta lagu guda jiro rakibidda hawlgalka ku habboon iyo ...
Sanduuqan qaybinta qaab-dhismeedka yar ayaa si ballaaran loogu adeegsadaa shabakadda FTTX si loogu xiro fiilada dhibcaha iyo qalabka ONU illaa dekedda fiyuusta. Waxay taageertaa kala-bixinta, qaybinta, isku-xirnaanta farsamada iyo rakibidda darbiga. Awoodda sanduuqan waxay noqon kartaa 1 xudun, 2 koronto iyo 4 gees. Astaamaha material Qalabka ABS ee la isticmaalay wuxuu hubiyaa jirka xoog iyo iftiin inst Qalab fudud oo fudud: Ku dheji darbiga operation Hawlgal fudud: fiilo fiiq leh oo aan u baahnayn in la furo qolofka ● Fiblooyinka fiilooyinka ka soo gala dhinac kasta, taageerista ...
Guudmarka Sanduuqa qaybinta qaabkan yaryar ayaa si ballaadhan loogu adeegsadaa shabakadda FTTX si loogu xiro fiilada dhibcaha iyo qalabka ONU iyada oo loo marayo dekedda fiber. Waxay taageertaa kala-bixinta, qaybinta, isku-xirnaanta farsamada iyo rakibidda darbiga. Awoodda sanduuqaani wuxuu noqon karaa 1 xudun, 2 koronto. Astaamaha material Qalabka ABS ee la isticmaalay wuxuu xaqiijiyaa jirka xoog iyo iftiin. ● Qalab fudud: Ku dhaji darbiga ama dhulka uun dhig. Slots Qalabka adabtarada oo la qaatay - Looma baahna boolal lagu rakibo adapters-ka. Fiber Ku xir fiilo fiilo la'aan baahi ...
FTTH Fibre Optical Face Box ZJ102
Guudmarka Sanduuqa qaybinta qaabkan yaryar ayaa si ballaadhan loogu adeegsadaa shabakadda FTTX si loogu xiro fiilada dhibcaha iyo qalabka ONU iyada oo loo marayo dekedda fiber. Waxay taageertaa kala-bixinta, qaybinta, isku-xirnaanta farsamada iyo rakibidda darbiga. Awoodda sanduuqaani wuxuu noqon karaa 1 xudun, 2 koronto. Astaamaha material Qalabka ABS ee la isticmaalay wuxuu hubiyaa jirka xoog iyo iftiin inst Rakibaado Fudud: Ku dhaji darbiga ● Fiblooyinka fiilooyinka laga soo galo ee jiho kasta, oo taageeraya fiilooyinka fiilooyinka ee xaaladaha kala duwan. Pter Qaboojiye la qaadan karo: SC, ...